आमा रूस: वर्ण को मूल, हाम्रो दिनमा आवेदन उदाहरणहरू
आमा, छोराछोरी, साथै प्राकृतिक स्त्री वस्तुहरु साँच्चै परिवार भएका छन् जो (आमा वोल्गा) जगाउन, एक पुजारी, एक महिला को पत्नी भनिन्छ। आमा रूस: यसको अभिभावक संस्था को विचार व्यक्त सारा देश सन्दर्भमा - तर शब्दकोशमा दिइएको छ र थप एक शब्द को प्रयोग। र कसरी जब यो चरित्र गरे? के यो आज छ महत्त्व छ?
विचार पुरातन रस मा देखा परे। पहिलो चरणको मा, शब्द वाक्यांश आमा नम पृथ्वी, महान् देवी आमा को एक भेद छ जो संग सम्बन्धित। रूसी धरती स्तन आकारमा हुनुको जीवित छ। को xvi शताब्दीमा बाट सुरू हुने, Andreya Kurbskogo र Maksima Greka को काम को प्रभाव अन्तर्गत नाम पवित्र रूस आए, र आफ्नो आमा-भूमि पवित्र रूस प्रकारको भएको छ। विचार को काम मा विकसित भएको थियो वी Trediakovsky, त्यतिबेला देश भन्दा अन्य प्रतीकात्मक पद को लागि प्रयोग भएको थियो हुनत, एफ Prokopovich, Lomonosov र XVIII सताब्दी मा - fatherland। उहाँले जसको कथा व्यक्तिगत छाप को निर्माण मा प्रयोग भएको थियो महिला फारम पत्रुसले म मा रूसी वर्ण बलियो बनाउन गर्नुभयो।
छवि दृश्य एफ बेकर द्वारा गरिएको थियो, पत्रुस म एक महिला रूपमा रूसी तथ्याङ्कले sculpting लागि पेश गरियो। उनको हात orb र scepter राखिएको थियो, र उनको टाउको मुकुट संग पहनाया थियो। शासक महिला फारम संलग्न masculinity सङ्केत र उनको प्राण सामग्री भरियो। विचार Pygmalion र Galatea को मिथक फिर्ता जान्छ। राजा-बुबा र आमा रूस प्रतीक अन्तमा क्याथरीन द्वितीय शब्द आमा राम्रो भन्दा शासक लागि स्थापित छ को शासन मा को रूप मा, XIX सताब्दी को शुरुवात गठन।
1812 को देशभक्तिपूर्ण युद्ध पहिलो वास्तविक लोकप्रिय प्रतिरोध को फ्रान्सेली सेना आक्रमणकारिहरुमा गर्न लहर भड्काए। मातृभूमि रक्षक को छवि पदक "मिलिशिया" (1816) मा embodied थियो कि एक महिला-आमा सँग सम्बन्धित थियो। छोराहरू - यो हतियार आफ्नो रक्षक दिने, रूस चित्रण गरिएको छ। यो लिङ्ग दृष्टिकोण सबै युरोपेली देशहरूमा सामान्य थियो, तर हाम्रो देशमा बाह्य शत्रु लड्न इम्पेरियल एकता र परिचालन को एक symbolization थियो। वास्तवमा, यो एक पवित्र विवाह, आमा रूस संग राजा को पिता थियो।
यो क्रान्तिको बेला अधिकारीहरु हातमा प्ले। को महारानी विहार विद्रोही तरबार आमा को डरले भागे जो छवि बचत गर्न। को अक्टोबर क्रान्ति पछि सेतो आन्दोलन रूपमा मातृभूमि को शोषणकारीहरूलाई विरुद्ध लड्नुपर्छ लागि कल, दृश्य प्रचार र लफ्फाजी बलियो छ। आफ्नो हात सहायता र आफ्नो छोरा को सुरक्षा, राजा को पिता को आवश्यकता मा गाँसिएको संग, आमा रूस प्रतिनिधित्व थियो। को Bolsheviks मात्र 30 सेकेन्ड मा फर्केपछि, अवस्थित वर्ण त्यागेर किन छ।
को अधिकारीहरु त चिन्न थियो र फिर्ती उहाँलाई लागि समय मात्र कुरा थियो कि सम्मान गर्ने fatherland को धारणा प्रयोग, तर आमा देश को छवि को सम्बन्ध मा कला र साहित्य मा embodied छन्। पहिले नै स्वागत तार Chelyuskintsev मा तिनीहरूले ठूलो मातृभूमि को योग्य छोराहरू भनिन्थ्यो। यो मातृभूमि र क्रान्ति को अवधारणाहरु को संश्लेषण को शुरुवात चिन्ह लगाइयो। आमा को महान देशभक्तिपूर्ण छवि महिनामा पोस्टर आई Toidze, को युग को एक प्रतीक भएको छ जसमा embodied। मातृभूमि मात्र होइन दुःख र बल हेर्न सक्नुहुन्छ, तर पनि अपील - एक अपील कर्तव्य को अर्थमा गर्न। bereaved र मूर्तिकला Mamaev हिल - - योद्धा, सक्षम नेतृत्व गर्न फिलिमहरु र साहित्यिक काम स्मारकका र स्मारक, कमजोर opalonnoy युद्ध देखियो।
सोभियत मातृभूमि को स्थान मा, रूसी अवधिमा राज्य बाट सधैं सँगसँगै देश महिलाहरु को छवि फर्के थियो। तर यो एक सौतेनी आमा को रूप मा देखा त्यसपछि - सुधार संग असन्तुष्ट एक विशाल संख्या कारण थियो जो आवारा केटी, बिक्री। आज, आमा रूस - फेरि छवि माग। सीमा गार्ड जस्तै प्रतीक, साथीहरू र शत्रुहरूलाई मा मान्छे विभाजित। यसलाई एकजुट र दुवै देश भित्र र विदेश राष्ट्रलाई को हित मा नागरिकहरु मजबूत समय छ।
नयाँ समय - नयाँ गीतहरू
Gennadiy Fodorovich Georgiev - ज्ञात कवि। 62 वर्ष को उमेर मा 2000 मा जीवन देखि retiring पछि, उहाँले कविता केही अद्भुत संग्रह ( "पहिले शीत मा" "द हृदयका आकर्षण", "मेरो राम्रो पुरानो साथी",) छोडेर। तर आफ्नो मुख्य उपलब्धि गीतहरूको जोसेफ Kobzon, Lyudmila Zykina, Renat Ibragimov, प्रणय Tolkunova Ludmila Nikolaeva जस्ता प्रसिद्ध कलाकार द्वारा प्रदर्शन गरिएको थियो। "आमा रूस" - तिनीहरूलाई एक। को फुरतीला नब्बे Gennady Fedorovich रचनाकार वी गाढा संग सहकार्य मा लेखे। trepidation आमा रूस को छवि बताइरहेका संग, यो देश को पुनरुद्धार विश्वास conveys। आमा प्रकृति र Bells द्वारा प्राप्त गर्दै बल रूस। देश टाढा उड हुनेछ समस्या र दुःखकष्ट सकिएमा र त्यहाँ एक समय आउनेछ।
दुई thousandth वर्ष त्यो गाए गायक जास्मिन सारा चक्रको काम सामेल मा संग्रह "बाट प्रेम प्रेम।" लोकप्रिय गायक लागि यो एउटा नयाँ समय को शुरुवात प्रतीक गर्न एकदम uncharacteristic, तर सुन्दर थियो। एक गीतहरू जास्मिन को - ए Zubkov आई Kaminska द्वारा कविता मा "आमा रूस"। त्यो पहिलो उद्वारकर्मी को दिन मा गाए। यो गीत मा नयाँ के छ? जी Georgiev वर्तमान विश्वास र आशा पद भने, त्यहाँ categorically रूसी शेड आँसु को शताब्दीयौंदेखि पछि आनन्द फेला बारेमा यसो छ। प्राणको गायक देश गर्न भएको छ कि स्मृति सबै संरक्षण गर्न, र उनको आफ्नो हृदय दिन इच्छा conveys।
वर्ण पक्कै के पश्चिमी लेखक चेतावनी प्रचार र राजनीतिक बोझ, छन्। एक विषय मा प्रशंसित हाल पुस्तकहरू - «आमा रूस» मौरिस Hindrusa। हामी शासक संग रूस को छवि को intertwining धेरै नकारात्मक पक्षहरू छन् कि सहमत गर्न सक्नुहुन्छ:
यो लोकतन्त्र रोक्छ र व्यक्तित्व, critically को अधिकारीहरु को कार्यहरू मूल्याङ्कन गर्न असमर्थ खेल्छ।
यस स्तम्भ मा उहाँले backwardness र पुरानो एक साइन मा एक अक्षर बनाउने, दुराग्रह र राष्ट्रवाद को ब्यानर उठाएको छ।
राष्ट्रलाई को प्रतिनिधिहरु को vaunted स्त्री तिर skewed छ।
तर कविता होश मार्फत श्रोता को दिल penetrates। प्रतिक्रिया मात्र निष्कपट र हार्दिक रेखाहरू छन्। यो गीतकार प्रतिनिधित्व जो यी छ। आमा रूस - देशको बासिन्दाहरू लागि विशेष प्रतीक। इतिहास को एक सताब्दी संग, त्यो संस्कृति को सबै भन्दा राम्रो प्रतिनिधिको प्रशंसा गरे। र सबैलाई स्कूल लाइन बाट सम्झना, भन्नुभयो K. Ushinsky हामी जो हामी आफ्नो भाषा सिकेका र शत्रु देखि एक आमा जस्तै सुरक्षा रूस पानी, nurtured छ।
युरोप को पहिलो Knights र वर्ग को शानदार इतिहास
रूस मा स्लाव भाषाहरु लेखन
कसले Komsomol र किन दिन मनाउन
Shogunate - जापान मा absolutist शासन हो। Tokugawa Shogunate
कसरी आईफोन एक्लै पुनः सुरु गर्न
बिना कुञ्जी इन्टरनेट कसरी खोल्न: आवश्यक मासुको लागि व्यावहारिक सल्लाह